Musharax Jabriil oo Kulan Furan oo Su'aalo lagu Weydiinayay u Qabtay Dadweynaha Beydhabo (SAWIRO)
admin Oct. 3, 2016, 9:18 a.m. 136
Hal Qaran (Beydhabo) - Dadweynaha ku nool gobolada Koofur-Galbeed oo maalmihi lasoo dhaafay su'aalo badan u qabay musharaxa madaxweynaha Soomaaliya ee 2016-ka Jabriil Ibraahim Cabdulle ayaa habeenimadi khamiista waxa ay fursad u heleen shir furan oo ay ku weydiinayeen su'aalaha ay qabaan.
Dadweynaha oo aad u farabadnaa, ayuu musharaxa ka dhageystay su'aalahooda isagoo mid-mid uga jawaabay su'aalaha dadweynuhu weydiinayeen.
Mudane Jabriil Ibraahim Cabdulle ayaa noqonaya musharaxi ugu horeeyay ee booqasho ku taga gobolada dalka, isagoo sidoo kale noqday musharaxi ugu horeeyay ee soo hor fariista dadweynaha si su'aalo ay uweydiiyaan.
Dadka meesha isugu yimid waxaa ka muuqatay rajo weyn ay ka qabaan in dalku uu ka bixi doono dhibaatooyinka dhaqaale, amaan iyo cadaalad-darro hadii xilka uu ku guuleysto Jabriil Ibraahim Cabdulle ay u arkaan inuu yahay mid aad uga duwan madaxdi dalka soo martay iyo kuwa hadda u sharaxan inay dalka madaxtinimadiisa qabtaan.
Sawiradi goobta su'aaluhu dadweynaha ku weydiinayeen: